တရားနှုတ်ခမ်းမသတ်နဲ့… တဲ့.. – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
တရားနှုတ်ခမ်းမသတ်နဲ့… တဲ့..သိပြီးသားကြီး.. နာပြီးသားကြီး…ဆိုပြီး… မလုပ်ရဘူး… တဲ့…ဒါ… ဟုတ်တယ်နော်…နာပြီးသား သိပြီးသားပင်မယ့် ထပ်ခါထပ်ခါ နာရတယ်… ကွယ့်…မပျင်းရပါဘူး နော်…ဖတ်ပြီးသားလည်း… ပြန်ပြန်ဖတ်…ဖတ်ပြီးသားပဲ… နော်… သို့သော်… လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ဖတ်တာနဲ့… အခုဖတ်တာ ပိုပြီးကောင်း လာတယ်….တရားကတော့ ကောင်းပြီးသားနော်… ကိုယ့် ရဲ့ အခံ ဓာတ်က ကုသိုလ် များတော့…. ပိုပို ရှင်းလာ တာ…. ကိုပြော တာ..ကဲ.. ဒါဆို…ကုသိုလ် အ ရေး မကြီး ဘူးလား?……တရား နာနေရင်း….တန်ဖိုး ရှိတဲ့ စကား လေးမို့…မိမိ နဲ့လည်း လက်တွေ့ ကိုက်ညီ နေတာမို့…မှတ်တမ်း ရေးမိပါ၏..တကယ်အမှန်တရားပါပဲ..လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်လောက်က နာဖူးခဲ့ တဲ့တရား ပါဘဲ…သို့သော်…ယခု ပြန်နာ လည်း ကြည့်ရော…အိုး… ဘာပြောကောင်းမလဲ… ဘယ်လို ကောင်းတယ် ဘယ်လောက် တောင်ကောင်း လိုက်သလဲ ဆိုရင် ကောင်းလွန်း လို့ ဉာဏ် ပွင့်လင်း လွန်း အားကြီးလို့… နှိုင်း ပြစရာ စကား လုံးတောင် ရှာလို့ မရ တော့ ပါဘူး… ကွယ်…တို့ ရယ်….ဒါဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ခုမှ ဆရာတော် တရား ဟောမှ သိရပေ တေါ့သည်…. ကွယ်… ကုသိုလ် ဓာတ်တွေ မိမိ စိတ်သဏ္ဍန် မှာ ကိန်းလာတာကြောင့်… တဲ့…ဟုတ်လိုက်လေ… မှန်လိုက် လေနော်…။
အရင်က နာခဲ့ စဥ်တွေက… ဝါသနာ အရ တရားသာနာတယ်…စကားလုံးတိုင်း heart မထိပဲ နာခဲ့ တာကိုး….ခုများကွယ်… တရား နာလိုက် တဲ့ စကားလုံး တလုံးတိုင်း တလုံး တိုင်းဟာ ဆိုရင်ဖြင့်… အေးခနဲ ကျဥ် ကနဲ ဖြစ် သွား ရအောင်..သဘော တွေပေါက်ပြီး… ပီတိတွေ ဖြစ်ရတာပါလားနော် …တရားနာရင်း ခေါင်းကတဆက်ဆက်ငြိမ့်မိလေတယ်…ကွယ်..ကောင်းလွန်းလို့ ကောင်းလွန်းလို့ … ပါ..အော်… ဒါကြောင့်…. အခံ ဓာတ်ကောင်းဖို့…. သိပ် အရေးကြီးတယ်လို့… ပြောတာ… တယ် မှန်နေပါ့လားနော်…ဒီ့ထက်ပိုပါသေးတယ် ပီတိဖြစ်မိမှုများကတော့ဖြင့်… ရေး၍မကုန်နိုင်တော့ပါ ….ယခု ဆိုရင်ဖြင့် စာရေး သူလည်း… ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို နှလုံးသားမှာ မိတ္တူ ကူးနေ ခြင်းဟာ ဆိုရင် ဖြင့်…မြတ်စွာဘုရား ရှင်ကြီး ကို..အင်မတန့် အင်မတန် ကို မှ ကြည် ညို သဒ္ဓါများ ပွားများ လာရ တာဆိုရင်ဖြင့်လေ…အိပ်မက်ထဲတောင် ဂုဏ်တော်ကပွားရက်သားကြီးဖြစ် နေတာ..နော်…။
(ညက အိပ်မက်ထဲ ဂုဏ်တော်ကို ပွားနေတာ) မြတ်စွာ ဘုရား ရှင်ကြီး၏ ကြည်လင် ဝင်းပ နေတဲ့ မျက်နှာ တော်ကြီး ဟာ ဆိုရင် ဖြင့်…မျက်နှာ ရှေ့တည့်တည့်မှာ လာလာပေါ် လို့ နေပါပြီ…ကော… ဘုရား စိတ်မျိုး မိမိမှာ ဖြစ်အောင် မိတ္တူကူး ရတယ် ဆိုတော့ကာ… ခုဆို အတော် ကို ရိပ်မိလို့နေ ခဲ့ပါပြီ…အော်… မြတ်စွာဘုရား ရှင်ကြီး၏ စိတ် ဘယ်လောက်များ အေးချမ်း နေလိမ့်မလဲ ဆိုတာ ….ခုလို ကုသိုလ်ဓာတ်တွေ မိမိစိတ်မှာ ရှိလာ တဲ့ အချိန်မှာ နာမိတဲ့ တရားတွေဟာ… ဘယ်မှာလာ ပြီး တန်ဖိုး ဖြတ် လို့ ရပါ တော့ မလဲလေ…အော်… ဆွဲအား… ဆွဲအား….ကု သိုလ် ဆွဲအား… တယ် လည်း ကြီးပါပေ လိုက်တကား………တရားနာနေရင်း… လွန်စွာ ပီတိဖြစ်လွန်း၍ ရေးမိပါ၏… နာ နေတဲ့ တရား ကတော့… မိမိ အားထုတ် ထားသော တရားများနှင့် ကွက်တိ မှတ်တိ heart ထိလို့ နေရပါပြီလား…ကွယ်တို့ရယ်….. ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်